I-Acrylic Tray, i-Acrylic Riser, i-Acrylic Display Stand - Ilanga elihlaza
I-Xiamen Green Sun Technology Co, Ltd
Ngethimba lokukhiqiza eliqeqeshiwe nelinolwazi, lithuthukile ngemishini, ukulethwa okufika ngesikhathi, sithola ukwazisa okuphezulu kumakhasimende ethu emhlabeni jikelele.
Izinkuni ze-Oak kanye ne-Acrylic Ephezulu Ecacile
I-Xiamen Green Sun Technology Co., Ltd igxile kumkhiqizo wokubonisa we-acrylic. Ngethimba lokukhiqiza eliqeqeshiwe nelinolwazi, lithuthukile ngemishini, ukulethwa okufika ngesikhathi, sithola ukwazisa okuphezulu kumakhasimende ethu emhlabeni jikelele. Isisekelo kumqondo wokuwina-win, amaklayenti amaningi azimisele ukusungula ukubambisana kwesikhathi eside nathi.
Singochwepheshe bezinhlobo eziningi zokukhangisa okushicilelwe futhi sibonisa imikhiqizo yekhabethe, njengazo zonke izinhlobo zeshoppe yokwakheka, i-shoppe yeselula, ikhabethe elctronic, amathuluzi wokubonisa izingubo, amabhokisi wokukhanya we-POP, itafula lokunyusa, isibonisi sokudla, inqubo yenqubo njll Imikhiqizo ithengiswe ezindaweni ezikude kakhulu, njengeNingizimu-mpumalanga ye-Asia, iMiddle East iYurophu, iNorth Amercia, iSouth Amercia ne-Australia njll.
Umnikazi we-Acrylic Acrylic Khombisa Yima Ukuboniswa Komkhiqizo we-Acrylic Uphawu lwe-Edge Lit Acrylic Khanyisa Acrylic Khombisa
Idizayini eyenziwe ngokwezifiso, iphendule ngesikhathi esifanele, Samukela ukuhleleka okuncane
Idizayini eyenziwe ngokwezifiso. Umbono wokuklama wamahhala unganikezwa. Ukuphendula ngesikhathi esifanele.uphenyo lwakho noma imibuzo izophendulwa kungakapheli u-24h. Singabantu ukwamukela oda elincane. MOQ yethu peices ezingaphezu kuka-50.
Magnetic Acrylic Sign Iziphathamandla, Isibambo Esibekiwe Sodonga, Acrylic Block Sign Umnikazi, Isibali Sophawu Lokusinda, Isibonisi sezibuko ze-Acrylic, Ukuboniswa kwewashi elijikelezayo le-Acrylic,